ချမ်းသာတဲ့ယောင်္ကျားကို ပိုင်ဆိုင်ချင်ရင် သင့်မှာ ဒီအချက်တွေ ရှိဖို့လိုပါတယ် - Mingalarday
Home > Uncategorized > ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ > ချမ်းသာတဲ့ယောင်္ကျားကို ပိုင်ဆိုင်ချင်ရင် သင့်မှာ ဒီအချက်တွေ ရှိဖို့လိုပါတယ်
March 22, 2018 MinGaLar Day
ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ လင်ယောင်္ကျားကို ပိုင်ဆိုင်ချင်ရင် ဒီလိုအချက်တွေ ရှိဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
မြင်တွေ့ နေကျ အခြား သာမန် မိန်းမ အမျိုးအစား အဖြစ်မှ ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။
တစ်နေကုန် ဈေးဝယ်ထွက်နေရလျှင် ပျော်ရွှင်နေသည့်ပုံစံ မဖြစ်သင့် ။
အဘယ့်ကြောင့်နည်း မိမိသည် သုံးဖြုန်းတတ်သော အပျော်ကြူးသူ မစေ့စပ်မသေချာသူ အဖြစ်မခံပါနှင့် ။
သမရိုးကျသော အဖွဲအစည်းမှ သီးခြား ခွဲထွက်လိုက်ပါ ။
အခြားသူနှင့်ကွဲထွက်သော အမူအကျင့် အပြုအမူ တစ်ခုပင်လျှင် ရာသက်ပန် အိမ်ထောင်ဖက် အဖြစ် မြင်စေနိုင်ပါသည် ။
မိမိသည် မည်သူမည်ဝါ ဖြစ်နေပါစေ ၊ မိမိကိုယ်ကို တန်ဖိုးထား တတ်ပါစေ။
အမျိုးသားများသည် မိမိကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားသော အမျိုးသမီးများအား အထင်ကြီး လေးစားနှစ်သက် တတ်ကြလေသည် ။
မိမိကိုယ်မိမိ ထိန်းကျောင်း ပြုပြင်နိုင်သော အရည်အချင်းသည်ပင် နှစ်လိုဖွယ် ကောင်းစေပါသည်။
ဤအချက်က ချမ်းသာသော အမျိုးသား တစ်ယောက်၏ အဓိကထား ရွေးချယ်ခံနိုင်သော အချက်ပင် ဖြစ်သည်။
လူတစ်ဦးစီ၌ ကိုယ်ရည် ကိုယ်သွေး တစ်မျိုးစီ ပိုင်ဆိုင်ပြီးသား ဖြစ်သည်။
ထုံထိုင်းသော ပုံစံမှ ခွဲထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ၊ လှပသော အရည်အချင်းကို ထုတ်ဖော်နိုင်အောင် ကြိုးစားသင့်သည်။
အချက်အပြုတ် ၊ ပန်းချီ ၊ ဂီတ စသဖြင့် မိမိ တတ်ကျွမ်းသော ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအား အဆင့်မြှင့်ထားပါ ။
လူချမ်းသာ အများစုသည် မိမိဘ၀၌ ဘာဖြစ်လာရမည် ဟူသော ရည်မှန်းချက် ရှိကြစမြဲပင် ။
မိမိ၏ အိမ်ထောင်ဖက်ကို လည်း ၄င်းလိုပင် ရည်မှန်းချက်ထားသူ ဖြစ်စေလိုကြသည် ။
၄င်းနှင့် နီးကပ်စွာ ထပ်တူကျသော အတွေးအခေါ် ရည်မှန်းချက်ကို လေးစားမည် ဖြစ်သည် ။
မိမိသည် တစ်ခြားသူအား ဆွဲဆောင်နိုင်လောက်သော ရည်မှန်းချက်နှင့် အရည်အချင်း ရှိနေလျှင် ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်ဖက်အား ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရရှိနိုင်လိမ့်မည်။
ပညာတတ်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ ၊ ထက်မြက်နေပါစေ
ထုံအသော အမျိုးသမီး တစ်ယောက်အား မည့်သည် လူချမ်းသာမှ အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ် ရွေးချယ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ ။
ချမ်းသာသော အမျိုးသား တစ်ဦးအား ပိုင်ဆိုင်လိုလျှင် ပညာရပ်များကို သင်ယူ တတ်မြောက် ထားသင့်သည် ။
ချမ်းသာသော အမျိုးသားများသည် စမတ်ကျပြီး ညဏ်ရည် ထက်မြက်သော အမျိုးသမီးများအား အလေးအနက်ထား ရွေးချယ်လိမ့်မည် ။
ချမ်းသာသော အမျိုးသား တစ်ဦးအား ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန် ရည်မှန်းချက်ရှိပါက အရည်အချင်း ပြည်ဝအောင် သက်ဆိုင်ရာ ပညာရပ်အား ကြိုးစား သင်ယူသင့်ပါသည်။
စာပေ ၊ ရုပ်ရှင် ၊ တေးဂီတ စသဖြင့် အနုပညာရပ် တစ်ခုခုအား လေ့လာထားသင့်ပါသည် ။
အကြောင်းမှာ ချမ်းသာသော အမျိုးသားများသည် ဤသို့သော အနုပညာရပ်ဝန်းနှင့် မကင်းသူများ ၊ ကိုယ်တိုင်နှစ်သက် တတ်သူများ ဖြစ်သည် ။
မိမိ စိတ်ဝင်စားသော ၊ မိမိနှင့် သင့်တော်သော အကြောင်းအရာအား ရွေးချယ်၍ အနုပညာဆန်စွာ နေထိုင်ပါ ။
လူချမ်းသာများ စုဝေးတတ်သော ကလပ်များ ၊ နေအိမ်၌ ပြုလုပ်သော ပါတီများ၊ အခမ်းအနားများ ကို မျက်ခြည် မပြတ်ပါစေနှင့်။
၄င်းတို့ ကျက်စားတတ်သော စားသောက်ဆိုင် ကဲ့သို့သော နေရာများကို သိရှိထားရမည် ။
နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်သော အလားအလာရှိသော သူအား ရိုးသားစွာ ချဉ်းကပ်ပါ ။
လေလံပွဲများ ပရဟိတ လုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ပူးပေါင်းပါဝင် လှုပ်ရှားပါ။
ချမ်းသာ ကြွယ်ဝသော အပေါင်းအသင်းများအား သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေဖွဲ့တတ်ပါစေ ။
စစ်မှန်သော အမျိုးသားနှင့်တွေ့ ဆုံပါက တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး နားလည်မှု ဖလှယ်ကာ ချစ်ခင်နှစ်သက်ပါက နှစ်ဦးသား လက်ထပ် ပေါင်းသင်းနိုင်မည် ဖြစ်သည် ။
မိမိ၏ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေမှ တဆင့် ၄င်းတို့၏ ဆွေမျိုး သို့ မဟုတ် အသိအကျွမ်း နှင့် ဆုံစည်းနိုင်ရန် အကူအညီကောင်းများလည်း ရနိုင်ပါသည် ။
ဤအချက်သည်လည်း ထိရောက်သော နည်းလမ်းဖြစ်သည် ။
မည်သို့ ပင် ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ထားပြီး အိမ်ထောင်ဖက် ရွေးချယ်ကာမူ တစ်ဦးအပေါ် တစ်ဦး နားလည်မှု နှင့်အတူ အိမ်ထောင်ရေး ခိုင်မြဲစေဖို့အရေးကြီးဆုံးမှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏ တန်ခိုး ဖြစ်သည်။
မိမိအား အလေးထား ရွေးချယ်စေလိုလျှင် အခြားသူအား လေးစားတန်ဖိုးထား တတ်ရန် သင်ယူပါ ။
Ref _ styles at life
ခမျြးသာကွှယျဝတဲ့ လငျယောကငြ်ျားကို ပိုငျဆိုငျခငျြရငျ ဒီလိုအခကျြတှေ ရှိဖို့ပဲ လိုပါတယျ။
မွငျတှေ့ နကြေ အခွား သာမနျ မိနျးမ အမြိုးအစား အဖွဈမှ ပွောငျးလဲလိုကျပါ။
တဈနကေုနျ စြေးဝယျထှကျနရေလြှငျ ပြျောရှငျနသေညျ့ပုံစံ မဖွဈသငျ့ ။
အဘယျ့ကွောငျ့နညျး မိမိသညျ သုံးဖွုနျးတတျသော အပြျောကွူးသူ မစစေ့ပျမသခြောသူ အဖွဈမခံပါနှငျ့ ။
သမရိုးကသြော အဖှဲအစညျးမှ သီးခွား ခှဲထှကျလိုကျပါ ။
အခွားသူနှငျ့ကှဲထှကျသော အမူအကငျြ့ အပွုအမူ တဈခုပငျလြှငျ ရာသကျပနျ အိမျထောငျဖကျ အဖွဈ မွငျစနေိုငျပါသညျ ။
မိမိသညျ မညျသူမညျဝါ ဖွဈနပေါစေ ၊ မိမိကိုယျကို တနျဖိုးထား တတျပါစေ။
အမြိုးသားမြားသညျ မိမိကိုယျကို တနျဖိုးထားသော အမြိုးသမီးမြားအား အထငျကွီး လေးစားနှဈသကျ တတျကွလသေညျ ။
မိမိကိုယျမိမိ ထိနျးကြောငျး ပွုပွငျနိုငျသော အရညျအခငျြးသညျပငျ နှဈလိုဖှယျ ကောငျးစပေါသညျ။
ဤအခကျြက ခမျြးသာသော အမြိုးသား တဈယောကျ၏ အဓိကထား ရှေးခယျြခံနိုငျသော အခကျြပငျ ဖွဈသညျ။
လူတဈဦးစီ၌ ကိုယျရညျ ကိုယျသှေး တဈမြိုးစီ ပိုငျဆိုငျပွီးသား ဖွဈသညျ။
ထုံထိုငျးသော ပုံစံမှ ခှဲထှကျနိုငျအောငျကွိုးစားပွီး ဆှဲဆောငျမှုရှိသော ၊ လှပသော အရညျအခငျြးကို ထုတျဖျောနိုငျအောငျ ကွိုးစားသငျ့သညျ။
အခကျြအပွုတျ ၊ ပနျးခြီ ၊ ဂီတ စသဖွငျ့ မိမိ တတျကြှမျးသော ကိုယျရညျကိုယျသှေးအား အဆငျ့မွှငျ့ထားပါ ။
လူခမျြးသာ အမြားစုသညျ မိမိဘဝ၌ ဘာဖွဈလာရမညျ ဟူသော ရညျမှနျးခကျြ ရှိကွစမွဲပငျ ။
မိမိ၏ အိမျထောငျဖကျကို လညျး ၄ငျးလိုပငျ ရညျမှနျးခကျြထားသူ ဖွဈစလေိုကွသညျ ။
၄ငျးနှငျ့ နီးကပျစှာ ထပျတူကသြော အတှေးအချေါ ရညျမှနျးခကျြကို လေးစားမညျ ဖွဈသညျ ။
မိမိသညျ တဈခွားသူအား ဆှဲဆောငျနိုငျလောကျသော ရညျမှနျးခကျြနှငျ့ အရညျအခငျြး ရှိနလြှေငျ ခမျြးသာသော အိမျထောငျဖကျအား ပိုငျဆိုငျခှငျ့ ရရှိနိုငျလိမျ့မညျ။
ပညာတတျဖွဈအောငျ ကွိုးစားပါ ၊ ထကျမွကျနပေါစေ
ထုံအသော အမြိုးသမီး တဈယောကျအား မညျ့သညျ လူခမျြးသာမှ အိမျထောငျဖကျအဖွဈ ရှေးခယျြလိမျ့မညျမဟုတျပါ ။
ခမျြးသာသော အမြိုးသား တဈဦးအား ပိုငျဆိုငျလိုလြှငျ ပညာရပျမြားကို သငျယူ တတျမွောကျ ထားသငျ့သညျ ။
ခမျြးသာသော အမြိုးသားမြားသညျ စမတျကပြွီး ညဏျရညျ ထကျမွကျသော အမြိုးသမီးမြားအား အလေးအနကျထား ရှေးခယျြလိမျ့မညျ ။
ခမျြးသာသော အမြိုးသား တဈဦးအား ပိုငျဆိုငျနိုငျရနျ ရညျမှနျးခကျြရှိပါက အရညျအခငျြး ပွညျဝအောငျ သကျဆိုငျရာ ပညာရပျအား ကွိုးစား သငျယူသငျ့ပါသညျ။
စာပေ ၊ ရုပျရှငျ ၊ တေးဂီတ စသဖွငျ့ အနုပညာရပျ တဈခုခုအား လလေ့ာထားသငျ့ပါသညျ ။
အကွောငျးမှာ ခမျြးသာသော အမြိုးသားမြားသညျ ဤသို့သော အနုပညာရပျဝနျးနှငျ့ မကငျးသူမြား ၊ ကိုယျတိုငျနှဈသကျ တတျသူမြား ဖွဈသညျ ။
မိမိ စိတျဝငျစားသော ၊ မိမိနှငျ့ သငျ့တျောသော အကွောငျးအရာအား ရှေးခယျြ၍ အနုပညာဆနျစှာ နထေိုငျပါ ။
လူခမျြးသာမြား စုဝေးတတျသော ကလပျမြား ၊ နအေိမျ၌ ပွုလုပျသော ပါတီမြား၊ အခမျးအနားမြား ကို မကျြခွညျ မပွတျပါစနှေငျ့။
၄ငျးတို့ ကကျြစားတတျသော စားသောကျဆိုငျ ကဲ့သို့သော နရောမြားကို သိရှိထားရမညျ ။
နှဈလိုဖှယျဖွဈသော အလားအလာရှိသော သူအား ရိုးသားစှာ ခဉျြးကပျပါ ။
လလေံပှဲမြား ပရဟိတ လုပျငနျး အဖှဲ့အစညျးမြား နှငျ့ ပူးပေါငျးပါဝငျ လှုပျရှားပါ။
ခမျြးသာ ကွှယျဝသော အပေါငျးအသငျးမြားအား သူငယျခငျြး မိတျဆှဖှေဲ့တတျပါစေ ။
စဈမှနျသော အမြိုးသားနှငျ့တှေ့ ဆုံပါက တဈဦးနှငျ့တဈဦး နားလညျမှု ဖလှယျကာ ခဈြခငျနှဈသကျပါက နှဈဦးသား လကျထပျ ပေါငျးသငျးနိုငျမညျ ဖွဈသညျ ။
မိမိ၏ သူငယျခငျြး မိတျဆှမှေ တဆငျ့ ၄ငျးတို့၏ ဆှမြေိုး သို့ မဟုတျ အသိအကြှမျး နှငျ့ ဆုံစညျးနိုငျရနျ အကူအညီကောငျးမြားလညျး ရနိုငျပါသညျ ။
ဤအခကျြသညျလညျး ထိရောကျသော နညျးလမျးဖွဈသညျ ။
မညျသို့ ပငျ ရညျမှနျးခကျြ ပနျးတိုငျထားပွီး အိမျထောငျဖကျ ရှေးခယျြကာမူ တဈဦးအပျေါ တဈဦး နားလညျမှု နှငျ့အတူ အိမျထောငျရေး ခိုငျမွဲစဖေို့အရေးကွီးဆုံးမှာ ခဈြခွငျးမတ်ေတာ၏ တနျခိုး ဖွဈသညျ။
မိမိအား အလေးထား ရှေးခယျြစလေိုလြှငျ အခွားသူအား လေးစားတနျဖိုးထား တတျရနျ သငျယူပါ ။
💖 ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူ တမ်းတမ်းစွဲချစ်နေစေမယ့် လျှို့ဝှက်ချက် (5)ခု 💖…
၈ ရက်သား ကလေးကိုချီရင်း အိပ်ပျော်သွားမိတဲ့ မိခင်ရဲ့ ကြေကွဲဖွယ်အဖြစ်ရပ်..။ မိခင်လောင်းတိုင်း ဒါလေးကို သတိမူကြပါ။..
April 29, 2018 MinGaLar Day Comments Off on အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာမင်္ဂလာဆောင်ပီးရင်ပီးသွားတာမဟုတ်ဘူး
အိမ်ထောင်ပြုမယ်ဆိုရင်အောက်ကအချက်တွေကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားပါ (1) ပုံမှန်ငွေဝင်လမ်းတခုခုရှိနေပီလားးး???(စီးပွားရေး) စီးပွားရေးမရှိဘဲဘယ်အိမ်ထောင်မှတည်ဆောက်လို့မရဘူး စီးပွားရေးရှိတာတောင်စားဝတ်နေရေးမပြေလည်ကြတဲ့အိမ်ထောင်သည်တွေထုနဲ့ဒေးရှိနေကြတာ ဘာဝင်ငွေဘာစီးပွားရေးမှမရှိဘဲနဲ့တော့အိမ်ထောင်ပြုဖို့မစဉ်းစားပါသေးနဲ့ဦးးး။ (2)ကိုယ်လက်တွဲမယ့်သူကိုအရာရာတိုင်းခွင့်လွှတ်သည်းခံနိုင်ပီလားး??? ကိုယ်လက်တွဲမယ့်သူကခြောက်ပစ်ကင်းသဲလဲစင်ဆိုတာတော့ ရှိချင်မှရှိမယ်။...
April 21, 2018 MinGaLar Day Comments Off on “ဖောက်ပြန်တဲ့သူကို ပစ်ထားပြီး ပိုလှအောင်နေပါ“
ချစ်သူ၊အိမ်ထောင်ဘက်က အခြားတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ဖောက်ပြန်နေပြီဆိုရင် အသဲနာပြီး ဒေါသတွေထွက်၊ အပြစ်တွေအပြန်အလှန်တင် ရန်ဖြစ်၊အအ်ိပ်ပျက်အစားပျက်ပြီး ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်နဲ့ သေချင်လောက်အောင်စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်ကြရပါတယ်၊ အချို့ဆို...